Ungayinqanda njani kwi-Twitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 306
Xa ungena ku-Twitter ungaphila amava amnandi kakhulu kwaye onwabisayo, kunye namava angathandekiyo. Ngokwengxenye ngenxa yesimo sengqondo somnye umsebenzisi onokuthi abonakalise umdla wabo ekwenzeni ubomi bakho bube yinto engenakwenzeka, ngenxa yesimo sengqondo esifana nokuxhaphaza okanye ukuxhatshazwa kwi-intanethi, kunye nokuhlukunyezwa.
Ngezi meko, i-Twitter yenza ukuba kufumaneke kubasebenzisi abahlupheka oku, ukubanakho kokuphelisa nakuphi na ukulandelwa kwabantu ababaphazamisayo. Inkqubo ibizwa ngokuba ibhloka kwaye kulula kakhulu ukuyifaka. Abasebenzisi abathintelweyo ngekhe babenalo naluphi na uhlobo lokunxibelelana nomntu obabhlokileyo.
Abayi kuba nakho ukukuthumela imiyalezo okanye ukufikelela kwiiTweets zakho, okanye nawuphina umxholo owabelane ngawo kuTwitter. Abayi kufumana nasiphi na isaziso sokuba bavinjiwe.
Ukusuka kwiiTweets ozifumeneyo kumgca wexesha ungamvimba umsebenzisi onoxanduva lokuyenza. Ukwenza oku, yenza oku kulandelayo:
Khangela iTwitter yomsebenzisi ofuna ukumvimba. Ngaphezulu kweTweet uza kufumana uphawu lwe-ellipsis ezintathu. Ukucofa le icon kuzakubonisa isithuba ukwenza ezinye iintshukumo.
Uya kuba nakho ukubona kwenye yazo "ibhloko" ecaleni kwegama lomsebenzisi. Nje ukuba ucofe eli candelo, iwindow iya kuvela kunye nenketho yokuthintela okanye ukucima isenzo. Qhubeka ucofe u "lock" ukuyenza ekugqibeleni.
Ukusuka kwiinkangeleko ungaqhuba inkqubo efanayo yokuvimba, kodwa indlela yokwenza yahlukile kancinci. Landela la manyathelo alandelayo:
Khangela iTweet kumntu ofuna ukumvimba. Cinezela igama lomsebenzisi ngaphezulu kweTwitter. Ungabeka igama lomsebenzisi kwibar yokukhangela ye-Twitter.
Emva kokuba ufake iprofayili yakho, uya kufumana ecaleni kwegama lomsebenzisi i icon kunye ellipsis ezintathu. Nje ukuba uyicinezele, ithebhu eneendlela ezininzi ziya kubonakala. Kuya kufuneka ubeke le ithi "ibhloko", ehamba negama lomsebenzisi leprofayile.
Cinezela olu khetho, kwaye kuya kuvela isazisi esingqinayo. Cofa u "tshixa" kwaye iprofayili iya kutshixelwa umphelo.
Lawula iiakhawunti ezivaliweyo
Ukusuka kuqwalaselo lweakhawunti yakho, uya kuba nakho ukungqinisisa iiakhawunti ezivaliweyo kwaye uziphathe, kwimeko apho ufuna ukuba nombono weakhawunti zonke, ukuba ngaba uthathe isigqibo sokuzikhulula kwi-blockade. Ukufikelela kwicandelo leeakhawunti ezivaliweyo, landela le ndlela ilandelayo:
Emva kokungena kwiakhawunti yakho, kuya kufuneka ufumane icandelo lesetingi kwiprofayile yakho. Oku kufumaneka kwimenyu esecaleni yexesha lakho kwiqonga lewebhu, ngelixa libekwe kwifoto yeprofayile ngaphezulu komgca wexesha, kwisicelo esiselfowuni.
Kwi-App, eli candelo libizwa ngokuba yimimiselo kunye nemfihlo. Ngokukhawuleza emva kokungena, kuya kufuneka ufumane icandelo "labucala nokhuseleko". Xa ufikelela, khangela "isimumu kunye nebhloko."
Kweli candelo kufuneka ufake "iiakhawunti ezivaliweyo". Uya kubona ngokuzenzekelayo zonke iiakhawunti ozivimbile ngaxa lithile ngesaziso "esivaliweyo" ebomvu. Ngokucinezela le yokugqibela, uya kuba nakho ukususa iqhaga lomsebenzisi.
1 Ibhloko kwiiTweets
2 Vimba kwiifayile
3 Lawula iiakhawunti ezivaliweyo
Uhamba njani kwintsholongwane kwiPinterest?